नियमित अण्डाकाे सेवन गराैं, फाइदा त कति हाे कति ? - Everest Dainik - News from Nepal
नियमित अण्डाकाे सेवन गराैं, फाइदा त कति हाे कति ?
अण्डामा भिटामिन ए, बी१२, डी र इ समेत प्रसस्त मात्रामा पाइन्छ । त्यतिमात्र होइन, अण्डाका अरु प्रशशस्त फाइदा पनि छन । अण्डाको नियमित सेवनले
तनाव कम गर्छ ।
याे पनि पढ्नुस अण्डाको मूल्य बढ्यो, लागत मूल्य अझै पुगेन
अण्डा खाएपछि भिटामिन बी १२ र डी प्राप्त हुन्छ । यी चीज प्राप्त भएपछि कुनै पनि मानिसको दिमाग तेज हुन्छ । अण्डामा एकप्रकारको कोलाइन नामक तत्व पाइन्छ । जसले न्यूरो प्रसारणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यसले स्मरण शक्ति ह्वात्तै बढाइदिन्छ ।
वजन ठिक राख्छ
अण्डाको सेवनपछि भोकसमेत कम लाग्ने हुनाले यसले वजनलाई सन्तूलित राखिदिन मद्धत गर्दछ ।
अनुहार चम्किलो राख्छ
अनुहार चम्किलो बनाउन पनि अण्डाको प्रयोग गरिन्छ ।
ट्याग्स: egg, health for egg